“ Australiaစတြေးလျနိုင်ငံ၏ညစ်ညမ်းသောပြproblemနာ” (ABC) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှု
“ သြစတြေးလျ၏ညစ်ညမ်းသောပြpornနာ” (ABC)
အဲဒါဟာအကြမ်းဖက်မှုပိုများလာတယ်၊ တခါတလေစွဲလမ်းတတ်တယ်၊ အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ရပ်တန့်ဖို့အားမရှိဘူး။ ABC စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုအရဒီနိုင်ငံမှာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုကတော့ရှင်းနေပါတယ်။ သြစတြေးလျမှာပြproblemနာရှိနေတယ်။
ဒါဟာစတိဗ် * သူကပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်သဘောပေါက်ကြောင်းညစ်ညမ်းအောင်သို့သူ့ရဲ့တတိယရည်းစားဖိအားပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့အချိန်ကိုလှည့်ပတ်ခဲ့သည်။
သူသည်ကလေးငယ်တစ် ဦး အနေနှင့်မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိခဲ့ချိန် မှစ၍“ အမာခံရုပ်ပုံများ” ကိုကြည့်ရှုခြင်းကိုပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ ထိုအရာကိုဝှက်ထားသောအချက်ကသူ့အားထိုစဉ်ကအနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။
သို့သော်မကြာသေးမီကမှသာယခု ၃၁ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်က၎င်းကိုကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်ဟုထင်မြင်လာသည်။
“ ကျွန်မရဲ့အဓိကဆက်ဆံရေးသုံးခုစလုံးမှာမိန်းကလေးတွေကအဲဒါကိုဒုတိယပဲခံစားရတယ်။ တချို့ကပါ ၀ င်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ သူတို့လျစ်လျူရှုခံနေရရင်ငါနဲ့ပိုပြီးအဆက်အသွယ်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်” ဟုသူကပြောသည်။
anti-porn ကင်ပိန်းလှုပ်ရှားသူများကပြုလုပ် woefully ပါဝါရှိသူတို့အားဖြင့် mishandled ခံကြောင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်တစ်ဦးလယ်ယာဖြစ်ပါသည်သင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ သငျသညျအမှုအရာထောင့်-store ကိုမဂ္ဂဇင်းနှင့်ကို VHS pornos ၏ခေတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့ခဲ့ကြသည်ထင်လျှင်အကြောင်း, ထို့နောက်အင်တာနက်သာရုပ်ရှင်အပေါ်လိင်ဘို့ငါတို့စာစားချင်စိတ်ကိုလောင်စာခဲ့သည်။
“ ငါဟာအရက်သောက်တာကိုစွဲလမ်းတယ်လို့ပဲအမြဲတမ်းထင်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုငါစွဲလန်းနေတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုလို့ယုံကြည်တယ်” ဟုသူကပြောသည်။
ကျွန်ုပ်၏အထွေထွေမောင်းနှင်မှုသည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်လိင်သည်လူတစ် ဦး ၏အရာထက်နည်းလာသည်၊
“ တကယ်တော့ငါဟာလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ ၁၀၀ ရာနှုန်းလောက်ကကျွန်တော့်ကိုပျော်ရွှင်နေတုန်းပဲ။ ဒါကကျန်းမာပြီလို့မထင်ဘူး၊ ရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေတာပဲ”
စတိဗ်၏သတိပေးပုံပြင်သည်ယနေ့ပညာတတ်များသည်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များကိုအသည်းအသန်ကြိုးစားနေကြသည်ဟူသောသတင်းစကားကိုထင်ဟပ်ပြသည်။ သင်၏လိင်အင်္ဂါများကိုသင်ဘယ်ကယူသည်ကိုသတိပြုပါ၊ အွန်လိုင်းတွင်သင်မြင်သောအရာအားလုံးကိုမယုံပါနှင့်။
သြစတြေးလျကိုဖြတ်ပြီးကျောင်းများ porn ၏ဘေးပေါ်တွင်လေးတွေပညာပေးရန်အထူးကုစပီကာအတွက်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်, လုံခြုံစွာလိင်၏သတင်းစကားကိုဟောခြင်းနေကြသည်။
သူတို့ကြားတာကတော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံဟာလိင်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဆီသို့ ဦး တည်နေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါ၊
Susan McLean ဖက်ဒရယ်အစိုးရအကြံပေးနှင့်ကျောင်းများ tours သူတစ်ဦးဆိုက်ဘာဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်ရဲအရာရှိသူတို့သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ရည်းစား porn အတွက်မြင်ကြပြီသောအရာတို့ကိုပုံတူပွားဖို့ကြိုးစားနေလေးနက်ဒဏ်ရာတည်တံ့ခိုင်မြဲအထက်တန်းကျောင်းမိန်းကလေးအစီရင်ခံစာများတစ်ခုတိုးပွားလာကြားနာနေသော ABC ရုပ်သံကိုပြောပါတယ်ကြသူအများအပြားကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
"ဒါဟာအရာဝတ္ထုကိုအသုံးပြု။ လေ့ရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်အတော်လေးအကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ချည်နှောင်ခြင်းခံရလေ့ရှိပြီးမိန်းကလေးများသည်ငြင်းဆိုရန်အလွန်စွမ်းအားမရှိဟုခံစားရလေ့ရှိသည်ဟု Ms McLean မှပြောကြားခဲ့သည်။
Ms McLean ကမူးယစ်ဆေးဝါးကောင်တာများကလမ်းများပေါ်မှနှုတ်ယူပြီးအဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရသောမိန်းကလေးများမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုလုပ်ရပ်များသည်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိအင်တာနက်ပေါ်မှသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောကလေးငယ်များနှင့်စတိဗ်ကဲ့သို့သောလူကြီးများအတွက်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများ တင်၍ သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားပြပြီး“ ဒီမှာလုပ်ပါ” ဟုပြောသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
porn အားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံရဖို့ယုံကြည်သည် - - ထိန်းချုပ်မှုထဲကရတယ် Credit: ABC တစ်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ဦးဆေးရုံတင်ထားရနှင့်သူမ၏ရည်းစားသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတူးဖော်ရေးပြီးနောက်ရဲကတရားစွဲခံခဲ့ရသည်ရှိရာတစျခုအမှုသတိပြုမိသည်။ နှစ်ဦးကငယ်စဉ်ကလေးဘဝလွဲချော်ရပ်တန့်ခဲ့သည်။
ကျောင်းများတွင်ပြောတတ်သူပညာပေးအားဖြင့် Credit: ABC မှလက်ဆင့်ကမ်းအခြားဇာတ်လမ်းများတွင်တစ်ဦး 16 နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးဒါမှဆိုးဆိုးဝါးဝါးသူမကယခု colostomy အိတ်လိုအပ်ပါတယ်အုပ်စုသည်စအိုလိင်ဆက်ဆံကြိုးစားနေဦးဒဏ်ရာရခဲ့သည်။
PornHub တူသောက်ဘ်ဆိုက်များ - ကမ်ဘာပျေါမှာအကြီးမားဆုံးများထဲမှ - သူတို့ရဲ့ဆွဲပါဝါကိုသူတို့ 33.5 အတွက် 2018 ဘီလီယံအထိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလညျပတျခဲ့ပြသသောထုတ်ဝေစာရင်းဇယားမြှင့်တင်ရန်။
သာအမေရိကန်, ဗြိတိန်နှင့်အိန္ဒိယကဲ့သို့အပိုကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေများကရိုက်နှက် - - သြစတြေးလျဧည့်သည်များအတွက်နဝမအဆင့်နှင့်လည်းမဟုတ်တော့ပျမ်းမျှအားကြည့်ရှုအဆတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။
porn ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းကို Reality နှင့်အန္တရာယ်မိန်းကလေးများရာခိုင်နှုန်းယောက်ျားလေးများနှင့် 90 ရာခိုင်နှုန်း 60 ထက်ပိုမိုအွန်လိုင်း porn မြင်ကြပြီခန့်မှန်းထားသည်။ ထိုအခါလူကြိုက်အများဆုံး porn ရာခိုင်နှုန်းကြောင်း 88 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ပါဝင်သည်။
ဒါကနောက်ဆုံးအချက်နိုင်ငံရပ်ခြားညစ်ညမ်းတွေ့ရှိရခဲ့သူ RMIT အကြီးတန်းကထိက Meagan Tyler ကကျယ်ပြန့်သုတေသနများ၏ဘာသာရပ်ခဲ့ - အရှိဆုံးအထူးသ US မှာ - သူတို့ရဲ့ content တွေကိုပိုပြီးအကြမ်းမဖက်အောင်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုစေပြီ။
ထုတ်လုပ်သူများစွာကအမျိုးသားဖောက်သည်များ၏ ၀ ယ်လိုအားကြောင့်ထိုသို့ပြုရန်တွန်းအားပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်ဟုသူမကဆိုသည်။
“ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းမှာနယ်နိမိတ်ကိုတွန်းပို့ပေးတဲ့အရာတွေအများကြီးဟာပုံမှန်နဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဘာမှမငြင်းဘူး။
"ဒါဆိုနှစ်ဆသုံးဆစအိုနဲ့ ... ပြီးတော့အူအူတွေလိုမျိုးတွေ။ "
Tasmanian မိသားစုဆရာဝန်နှင့် General Practitioner သမ္မတ Bastian Seidel ဟောင်းတော်ဝင်သြစတြေးလျကောလိပ်, သောအခါ၌ပင်ကြည်ကြည်, ဘယ်လိုသောဤလှုပ်ရှားမှုများမမြင်စဖူးစိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မှားယွင်းနေသွားနိုင်ပါတယ်။
“ အမျိုးသမီးတွေမှာအဲဒါကိုငါများများတွေ့ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေနဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံတာကြောင့်ဖြစ်ရတာ။ ”
ဤလုပ်ဆောင်မှုများ၏သီးသန့်သဘောသဘာဝသည်ဆရာဝန်များနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး“ သဘောတူ” သောလိင်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများကိုသတင်းပို့ရန်မလိုအပ်ပါ။ မစ္စ McLean သည်အခြေအနေ၏ပြင်းထန်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့နားမလည်ပါ။
“ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်အလက်တွေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး၊ အဲဒါကိုကျွန်တော်မပြောချင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အကြံပြုလိမ့်မယ်” ဟုသူကဆိုသည်။
ထို့နောက်သင်တန်း၏, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု non-ကြည်ကြည်လုပ်ရပ်များရှိပါတယ်။
စာရာ * သည်ညစ်ညမ်းသောမှားယွင်းသောမှားယွင်းမှုများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးစိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုဖြည့်ဆည်းရန်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ရှာဖွေမှုတွင်မနှစ်လိုဖွယ်ပါ ၀ င်သူဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူမ၏အစ်ကိုသူမ၏ molesting စတင်ခဲ့သည့်အခါသူမသည်ကိုယ့်ခုနစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။
သူကကောက်ကျစ်သူမကလည်း, sneaky ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကသူမ၏ထက်နှစ်ပေါင်းသာစုံတွဲတစ်တွဲအဟောင်းများကိုခဲ့ပေမယ့်ဆိုင်တွေကိုသွားနှင့်ပလပ်စတစ်ထုပ်ထဲမှာကိုတံဆိပ်ခတ်သောအရွယ်ရောက်ပြီးသူမဂ္ဂဇင်းများကိုခိုးယူမယ်။
ယခုအသက် ၄၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သောစာရာဤသို့ပြန်ပြောပြသည် -“ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာသူတွေ့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်ပြောပြဖို့သူကကျွန်တော့်ကိုသုံးလိမ့်မယ်။
သူကနောက်ပိုင်းမှာမိမိအနှောင်းပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ကားကိုလေယာဉ်ပျက်ကျမှု၌သေလိမ့်မယ်, နှငျ့စာရာနောက်ဆုံးတွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာသူမ၏မိဘများကိုပြောပြမယ်လို့ရှေ့တော်၌ထက်ပို 20 နှစ်ပေါင်းလိမ့်မည်။
ထိုအခါ 2015 အတွက်သူမရဲ့ဟောင်းတဦးရည်းစားများကအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည်။
သူမ ထပ်မံ၍ ပြုလုပ်ခဲ့တာကတော့“ ငါအေးခဲနေပြီး clencenched လုပ်လိုက်ပြီးမလုပ်ဖို့သူ့ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။
ရဲများကစုံစမ်းစစ်ဆေးသော်လည်းစွဲချက်မတင်ဘဲစာရာကိုစွန့်ခွာ။ နောက်ပိုင်းတွင်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ခံရသူများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးခုံရုံးမှတစ်ဆင့်လျော်ကြေးကိုအောင်မြင်စွာရှာဖွေနိုင်ခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေမှာကြည့်ရင်ဒါကတကယ့်ဘဝမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကဘယ်လိုမှမဟုတ်ပါဘူး” ဟုစာရာကသတိပေးသည်။
“ ဒီနိုင်ငံဟာဒီဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေရတာငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး၊ ငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းကိုအာမခံထားတာပဲ”
analogue ဥပဒေများအတူ flyer ဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်
လောလောဆယ်သြစတြေးလျတွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသည့် eSafety ကော်မရှင်နာ, ဂျူလီ Inman Grant ကအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်, သင်ပုံမှန်ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ကြည့်ရှုမယ်လို့ရုပ်ရှင်သက်ဆိုင်ကြောင်းအတူတူခွဲခြားသည့်စနစ်သုံးပြီးအကဲဖြတ်သည်။
R18 + (မြင့်မားသောသက်ရောက်မှုအချည်းစည်း၊ simulated sex) ကိုခွဲခြားထားသည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ထားသောစနစ်၏နောက်ကွယ်တွင်ထားရန်လိုအပ်ပြီး၊ X18 + (အတိအလင်းလိင်ဆက်ဆံမှု) အဖြစ်ခွဲခြားထားသည့်အကြောင်းအရာများကိုသြစတြေးလျတွင် ထားရှိ၍ မရပါ။
အဲဒီမှာ DVDs နဲ့မဂ္ဂဇင်းဘို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအစုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူကိုဤအရက်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းချွတ် porn ဝယ်ယူ?
ကြည်လင်သောအများစုယခုအွန်လိုင်းနှင့်ပင်လယ်ရပ်ခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတည်ခင်းဧည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား, ထိန်းညှိအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။
eSafety ကော်မရှင်နာသည်နိုင်ငံခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့အကြောင်းကြားစာများထုတ်ပေးရန်အာဏာမရှိပါ။ လက်ရှိတွင်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုအကြောင်းအရာများကိုပိတ်ဆို့ရန်ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိပါ။ အကောင်းဆုံးမှာ၊ လူတို့သည်၎င်းတို့၏စက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်လူများ ၀ ယ်ယူတပ်ဆင်နိုင်သောရွေးချယ်စရာအင်တာနက်စစ်ထုတ်စက်များရှိသည်။
ဆိုလိုသည်မှာသြစတြေးလျ၏စည်းမျဉ်းများသည်အကြမ်းဖက်မှုကိုဖြစ်စေ၊ “ ကန့်ကွက်ခြင်း” ဖြစ်စေသည့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုဒေသတွင်းတွင်ကြည့်ရှုခြင်းကိုတားဆီးခြင်းမပြုသည်။
သြစတြေးလျညစ်ညမ်း Garion ခန်းမပြည်တွင်းဖြစ်လုပ် porn အတွက် trailblazer ၏အရာတစ်ခုခုသည်နှင့်သူ့ပုံပြင်ကိုသြစတြေးလျဆိုင်ရာဥပဒေများရဲ့မွေးရာပါဝိရောဓိမီးမောင်းထိုးပြ။
သူသည် Abby Winters ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်“ ချစ်ခြင်း၊ ဂရုစိုက်ခြင်း၊ ပျော်စရာကောင်းသော၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော” porn ဟုခေါ်ဝေါ်သောသရုပ်မှန်စုံတွဲများကိုအာရုံစိုက်ပြီးတည်ထောင်ခဲ့သည်။
သို့သော် 2009 ရဲတပ်ဖွဲ့အတွက် Abby Winters ၏မဲလ်ဘုန်းမြို့ရုံးဝင်ရောက်စီးနင်းနှင့်၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီနောက်ပိုင်းတွင်ကန့်ကွက်စရာဇာတ်ကားတွေထုတ်လုပ်များအတွက်ဒဏ်ငွေပေးဆောင်နှင့်အတူနှစ်ဦးညစ်ညမ်း-related ပြစ်မှုများများအတွက်တရားစွဲဆို။
ရက်သတ္တပတ်မစ္စတာခန်းမတစ်ခုအမှု၌ဒိုမိန်းနေဆဲတည်ခင်းဧည်နှင့်လွတ်လပ်စွာနေအိမ်ကနေ site ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သူသြစတြေးလျ subscriber များအား, sign up ကိုဆက်လက်ဘယ်မှာအမ်စတာဒမ်, ရန်သူ၏စစ်ဆင်ရေးအစအဆုံးပြောင်းရွှေ့။
"အမေရိကန်မှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကဒီအရာအောက်မှာရှိတယ်။ အမေရိကန်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပညာရှင်တွေကအရမ်းပျော်တယ်" ဟု Mr Hall က ABC သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့တိုင် Mr Hall သည်ရန်လိုသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမထောက်ခံသည်သာမကစက်မှုလုပ်ငန်းသည်ထိုလမ်းအတိုင်းတဖြည်းဖြည်းရွေ့လျားနေသည်ဟုမယုံကြည်ကြောင်း၊ အင်တာနက်သည်၎င်းကိုအလိုရှိသူအနည်းငယ်အတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေရန်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။
သူဟာ created porn အမျိုးအစားနေဆဲလူကြိုက်များခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
ဒေသခံဥပဒေများကျော်လွှားနိုင်ရန်, Abby Winters သြစတြေးလျမော်ဒယ်ထို့နောက်ရုပ်ရှင်အညွန့်အဘို့ရေခြားမြေခြားကသူတို့ကိုပျံသန်းဖို့ချေတွေ့။
ဘရစ္စဘိန်းမော်ဒယ်လီလီ * မကြာသေးမီကသူမအကြောင်းကို $ 9,000 တစ်ဦးလစာစလစ်ဘို့, သုံးပတ်ကျော်ကိုးအညွန့်အတွက်ဖျော်ဖြေဘယ်မှာအမ်စတာဒမ်တစ်ဦးစစ်မှုထမ်းမှပြန်လာသောသိရသည်။
သူမသည်ထောက်ခံနှင့်ပွားအဖြစ်ဒေသခံ porn အသိုင်းအဝိုင်းဖော်ပြထားတယ်, သူပါဝင်ပတ်သက်မိန်းမများနောက်ဆုံးအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှိပါသည်သောစိတ်ကူးစိန်ခေါ်။
၎င်းသည်ပုံမှန်ဘုံယူဆချက်နှင့်လီလီယန်သည်သူမ၏မိသားစုအတွင်း၌အမ်စတာဒမ်သို့မသွားရန်ငွေပေးရန်ကမ်းလှမ်းသောအဒေါ်တစ် ဦး အပါအ ၀ င်ပြောဆိုရန်ရှိသည်။
“ ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်၊ ဒါကလူတွေကိုယုံကြည်မှုပေးတယ်။ ယုံကြည်မှုအရမ်းများတယ်။
“ အလွန်ကြီးမားသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူသင်ကလူတိုင်းကလက်ခံပြီးချစ်မြတ်နိုးခြင်းကိုခံစားနိုင်သည်။ ”
ပြီးတော့သူမကခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်“ ကမ္ဘာကြီးဟာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ဟပြောဖို့လိုတယ်” ဆိုတဲ့သတင်းစကားပါပါတယ်။
လီလီမဟုတ်သလိုမစ္စတာခန်းမကိုမသွားတကယ်တော့ porn အများအပြားအဘို့အမညီကြောင်းခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်ကလေးများအကြောင်းကိုပညာတတ်ဖို့လိုကြောင်းကနေရှက်။
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ်ရှင်သည်ပconflictိပက္ခများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ လေ့ကျင့်ရေးဗီဒီယိုမဟုတ်သကဲ့သို့ကလေးငယ်များကိုသင်ကြားရန်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်မှာနည်းပြမဟုတ်ဘဲမည်သို့လမ်းပြမည်နည်းဟု Mr Hall ကပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူကခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းစကားပြောဆိုမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်လိုအပ်ကဆိုသည်။
“ ဒါကကော်ဇောအောက်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေပါတဲ့အရာပါ။ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရတယ်လို့ယူဆတယ်” ဟုသူကပြောသည်။
အဖြစ်မှန်နှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို ခွဲခြား၍ မရသောကလေးများအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည့်သတင်းစကားကိုသေချာစွာပို့ပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
အဆိုပါ eSafety ကော်မရှင်နာ: ဤအတွက်သူသြစတြေးလျအတွက် Abby Winters အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပရန်သူ၏စွမ်းရည်ကိုထိန်းညှိမယ်လို့သူကအရမ်းလူတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ဦးမဖြစ်နိုင်မဟာမိတ်ဝေမျှပေးသည်။
အားလုံးယုံကြည်ချက်၏အစိုးရများကတာရှည်အွန်လိုင်း porn ၏မြင့်တက်ဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုနှင့်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ schoolyard နှင့်အိပ်ခန်းထဲမှာဖုန်းများမှ loungeroom ကွန်ပျူတာများကနေတိုင်းပြည်နှင့်တိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်အနှံ့အင်တာနက်ပျံ့နှံ့အဖြစ်, ဥပဒေပြုအမတ်များက၎င်း၏ဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
နှစ်တွေအမျိုးမျိုးသောမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များနှင့်ကော်မတီများလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်အဘယျသို့သို့အကြံပြုချက်များ၏ reams ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။
ထိုအချိန်အတောအတွင်းမှာ eSafety ကော်မရှင်နာမိဘများအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကလေးတွေပညာပေးရန်ထားရှိနေကြသည်ကိုထိန်းသိမ်းထားနှင့်အင်တာနက် filter များကဲ့သို့အကြားဝင်အန္တရာယ်ရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
"ကလေးတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံခြုံစိတ်ချရသောအတွေ့အကြုံများရရှိစေရန်ကူညီပေးရာတွင်မိဘများသည်ရှေ့တန်းမှကာကွယ်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ငယ်ရွယ်စဉ် မှစ၍ မသင့်လျော်သောအရာများကိုသူတို့နှင့်ထိတွေ့ခြင်းပါဝင်သည်" ဟုမစ္စ Inman Grant ကပြောသည်။
သင့်ကလေးများ၏အွန်လိုင်းဘဝတွင်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်မှုနှင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းကိုအစားထိုးခြင်းမရှိပါ။
Melinda Tankard Reist တူသော porn သုတေသီများ၎င်းတို့၏တင်ပြချက်များနှင့်ကျွမ်းကျင်သူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအစိုးရကကြားသိလျက်ရှိသောယုံကြည်ခြင်းဆုံးရှုံးဖို့စတင်နေကြသည်။
“ နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာဆက်စပ်ပတ်သက်တဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ခြောက်ခုမှာကျွန်တော်ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီးဘာမှဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Mitch Fifield အွန်လိုင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုသို့သစ်နှစ်မျိုးကိုလွတ်လပ်သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏ပုံစံ, ဇွန်လအတွက်ဧရိယာသို့နောက်ဆုံးပေါ် foray ကြေညာခဲ့သည်။
ပထမ eSafety ကော်မရှင်နာ၏တန်ခိုးကိုကြည့်မည်သူတို့ကတိုးချဲ့ဖို့လိုသလားဆိုတာကို။
အခြားအမှုအရာတို့ကိုအကြား - - မသင့်လျော်ညစ်ညမ်းဒုတိယအွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုရန်နှင့်ဖြေရှင်းရန်မဆိုဖြစ်နိုင်သောမူဝါဒကအတိုင်းအတာရှိပါတယ်ရှိမရှိဆက်စပ်သောအသံလွှင့်န်ဆောင်မှုများအက်ဥပဒေအစိတ်အပိုင်းများကိုဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်။
မစ္စတာဖီဖီးလ်ဒ်၏ရုံးသည် ၀ န်ကြီးအား ၀ န်ကြီးနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းမပြုပါ။ သို့သော်ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏တွေ့ရှိချက်များကိုဖေဖော်ဝါရီလထက်နောက်မကျဘဲလွှတ်တော်တွင်တင်သွင်းမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။
အထက်လွှတ်တော်နောက်ဆုံးတစ် 2016 စုံစမ်းရေးအတွက်ပြဿနာမှာကြည့်ရှုလျက်, တစ်ဦး spinoff ကျွမ်းကျင်သူ panel ကိုဒီဇင်ဘာလ 2017 အတွက်အစိုးရမှ၎င်း၏မူဝါဒအားထောက်ခံချက်များတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
လစ်ဘရယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Jonathon Duniam ကြောင်းစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးတည်းကြီးနှင့်သူမပါအဆင်သင့်အဖြေတွေကိုရှိပါတယ်ဝန်ခံသည်။
ပြည်ပမှညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည့်အင်တာနက်ပိတ်ဆို့မှုများသည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်ပြီးယခင်ကနိုင်ငံရေးအရအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ Mr Fifield ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ABC သို့ပြောကြားရာတွင်အစိုးရအနေဖြင့်“ opt-out” စစ်ထုတ်သည့်စနစ်ကိုချမှတ်ရန်အစီအစဉ်မရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ 2016 စုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှတင်ပြချက်များကိုလည်းစိတ်ကူးသူတို့ကမြင့်မားသောကိုယ်ကျင့်တရားမြေပြင်အဘို့အတိုးဝှေ့သကဲ့သို့အုပ်စုများကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုထုတ်ဖေါ်။ တဦးတည်းအုပ်စုတစ်စု filter များလေးတွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြောပါတယ်နေစဉ်, အခြားအုပ်စုတစ်စုဆင်ဆာအော်ဟစ်။
သူမက“ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာတွေအတွက်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီလို့သူ့ကိုခေါင်းတလားထဲထည့်ဖို့စာတစ်စောင်ရေးလိုက်တယ်” ဟုသူမကဆိုသည်။
“ ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစားလေ့ရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်အဲဒီလိုလုပ်ခဲ့ရတာပါ။ ”
“ လူတွေက 'သူမလိုချင်တာလား' ဒါမှမဟုတ်ဒီမိုက်မဲတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူတွေကထင်နေကြတယ်၊ ပြီးတော့ရပ်တန့်ပစ်လိုက်ရတယ် "ဟုသူမကဆိုသည်။
မင်းတစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မင်းဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။ ဗွီဒီယိုတစ်ခုမှာမင်းမြင်ခဲ့လို့မင်းစမ်းကြည့်တာမဟုတ်ဘူး။ ”
* အမည်များ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ပြောင်းထားပါတယ်။
အသက်အရွယ်အလိုက်သတ်မှတ်ချက်အပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုပျက်ကွက်မှုအတွက်အစိုးရအားဆန့်ကျင်။ အမှုဖွင့်ခြင်းအကြောင်းယနေ့ဂါးဒီးယန်းတွင်ကောင်းမွန်သောအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည်။ t.co/l33sGqUS5f